Nke Apple MacBook laptọọpụ m kwesịrị izu? - News Ọchịchị
Mary kwesịrị dochie ya 2009 MacBook Pro ma na-bụkwanụ site nhọrọ. Nke bụ ihe kasị mma nhọrọ?
Isiokwu a na-akpọ “Nke Apple MacBook laptọọpụ m kwesịrị izu?” e dere site Jack Schofield, maka theguardian.com on Thursday 15 November 2018 10.00 UTC
M soldiered on na a 2009 MacBook Pro, nke m na-eji maka internet ohere, elekọta mmadụ media, photos, na m research. Ma iji nweta n'ọbá akwụkwọ mahadum remotely, M nwere iji ihe elu-ụbọchị sistemụ, na m Mac bụ ya mere agadi na m nwere ike agaghịkwa imelite ya.
Ya mere, M chọrọ ịzụta a ọhụrụ MacBook, ma riri m ọnụ nhọrọ. Ọ dị m mkpa a Touch Bar? Ole ebe nchekwa na SSD eme m mkpa? Mary
Ịgbaso ngwaahịa ume on 30 October, Apple nwere anọ MacBooks na-eme nnọọ otu ihe ahụ ọrụ. The ozi ọma bụ na, ma ọ bụrụ na i nwere ike na-adị ndụ na a 2009 MacBook Pro, ọ bụla n'ime ha ga-adị mma gị na nzube. The ọjọọ ozi ọma bụ na ha niile nwere atụmatụ na-ga-etinye m ka m ịzụ ha, ezie na, na chioma, ha ga-bụchaghị na-etinye gị.
Otú ọ dị, M na-eche na ọ dị mkpa ka gaa ihe Apple Store ma ọ bụ ndị ọzọ stockist mere na ị pụrụ iji tụnyere dịkarịa ala abụọ 13in MacBooks nade. Ndị a bụ ndị agadi MacBook Air (kacha mma keyboard, kasị njọ na ihuenyo) na MacBook Pro (jọgburu keyboard, oké ihuenyo).
M nwere ike ịgwa gị nke ibe ngwa ngwa, were gabazie, ma gị onwe onye ahụmahụ ga-adịkwaghị àgwà nke keyboard na ihuenyo. A blog post ike ịgwa unu nke ndị ị ga-amasị, ma ọ bụ ebe ị ga-ahọrọ ime ka uf od.
All ọhụrụ Mac laptọọpụ-abịa na Apple si ala-njem urukurubụba keyboard, nke pụtara na-akpata nkewa. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Maka m, nnukwu nsogbu na ọhụrụ MacBooks bụ urukurubụba keyboard, nke akpa ẹkenam na 12na MacBook na 2015. The abụọ version pụtara na MacBook Uru, ebe a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nwere keyboard ọdịda n'ihi na ájá ma ọ bụ detritus na-n'okpuru igodo. The ọhụrụ MacBooks nwere a atọ version na ụma akara na-esi n'ájá. Anyị nwere ma na-ahụ otú ọ na-anọchi elu karịrị oge.
E wezụga na, M na-ahụ na-urukurubụba keyboard na-enye a jọgburu onwe dee ahụmahụ. M mụtara na-emetụ-ụdị na typewriter, na m na-ahọrọ keyboards na n'ibu igodo na nza nke njem. Butterfly igodo nwere fọrọ nke nta ka ọ bụla njem. Nke a ga-inupụ m kwupụta ochie MacBook Air, nke nwere a dị ezigbo mma keyboard site laptọọpụ ụkpụrụ.
Ọ dị mwute, ochie MacBook Air nwere nsogbu ndị ọzọ. Ọ kachasị, na touchpad na ihuenyo bụ njọ karịa ndị na ọhụrụ MacBook Air. (Ha na-na ọ bụghị ihe ọjọọ, ma ha na-adịghị dị ka mma.)
obi ụtọ na-, na-amasị ịdị iche. Ụfọdụ ndị na-ahọrọ ewepụghị, anabata keyboards, na i nwere ike ịhụ na ị na dị ka urukurubụba keyboard. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ na-eme gị oke mfe. M nnọọ na-eche na ị chọrọ inye ya a dị oké njọ na-aga - pịnye a narị ole na ole okwu na ya - tupu ị na-enyefe na-eji ya ụbọchị nile ụbọchị ọ bụla ... ma ọ bụ na-ebu mpụga USB keyboard gburugburu.
Touch Bar? Emela
The Touch Bar-anọchi nke F igodo na MacBook Pro. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ị adịghị mkpa a Touch Bar. N'ezie, ọ dịghị onye n'ezie kwesịrị a Touch Bar. Nke ọ bụla, ha na-na na-ruo eruo na ihe dị oké ọnụ MacBook Uru, na m iche na ị bụghị mmasị ịzụrụ a ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ MacBook karịa gị mkpa.
The 13ke ufọt ufọt 2009 MacBook Pro nwere Intel Core 2 duo processor, nke bụ ihe juru site taa ụkpụrụ. The isi nlereanya nanị 2GB nke na ebe nchekwa (expandable na 8GB) na a 160GB ike mbanye, ezie na omenala upgrades gụnyere 128GB na 256GB SSDs. The kasị ala na MacBook ị pụrụ ịzụta taa ga-mma nkọwa.
O di nwute na, i nwere ike kwalite taa MacBooks, ya mere na ị nwere ịzụta ihe dị ike dị ka ị ga-mkpa mgbe ọ bụla. n'ihi Ekliziastis, ọ ga-aka mma nwere 16GB nke ebe nchekwa na a 256GB ma ọ bụ ibu SSD, ma Apple ebubo a nnukwu adịchaghị n'ihi na ndị a upgrades.
Ọ dabara nke ọma, MacBooks jide ha bara uru nke ọma, otú ahụ ka ọzọ bụ na-aga n'ihi na isi spec na, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ gị mkpa ọzọ ike, ere ya zụrụ a ọhụrụ otu.
The MacBook eji Intel nke ala-na-ike processors. Foto: Apụl
E nwere onye na-abụghị doro anya nsogbu na abụọ nke gị omume MacBooks nwere Intel Core M processors, nke ikwere na ọsọ na-enye mma ndụ batrị. Apple mbụ odomo a na 1.1GHz sọrọ-isi M-5Y31 mgbawa eji na 2015 MacBook (12na ihuenyo). taa, Core M ibe na-eji ọ bụghị nanị na 12in MacBooks, kamakwa ọhụrụ MacBook onwe.
Ọ bụghị doro anya n'ihi na Intel gbanwere ya akpọ atụmatụ. Ndị mmadụ na-a gaara yipu site "Core M" designation eleghị anya ga-agaghị na-achọpụta na ha na-na-a Y usoro mgbawa - kpọmkwem, a Core i5-8210Y - kama nke ndị ọzọ dị ike U usoro ibe-eji na mainstream laptọọpụ.
M nwere ihe ọ bụla megide Core M / Y usoro ibe, na m 8GB / 128GB aka-ihuenyo Lenovo Yoga 700 nwere otu Core M3-6Y30 eji ụfọdụ MacBooks. Ihe dị iche bụ na ọ bụ a igwe nkịtị / ezumike iji, abụghị m isi usoro na ọ bụ naanị na-efu m £ 339,99. M ga-azụta otu dị ka m bụ isi igwe, na odori £ 1,200 n'ihi na otu onye bụ mkpari.
A Core i5-8210Y kwesịrị ngwa ngwa n'ihi na ìhè gị na-eji - nke nwere ike na-eto eto oge na-aga - ma ọ bụ ka ogbenye uru maka ego na a MacBook Air.
ekwe Omume nhọrọ
Apple ochie MacBook Air. Foto: Simon Lees / Future Publishing / Rex
Apple nọgidere ochie 13in MacBook Air, na ya anya nke kacha mma uru maka ego na £ 949, n'agbanyeghị ise-emana Core i5-5350U processor na na-abụghị retina ihuenyo. ọ nwere, ka m siri hụ, nke kacha mma keyboard, na ya ka nwere ezi ochie ọdụ ụgbọ mmiri, gụnyere SD kaadị oghere na a magsafe njikọ. N'akụkụ nile ọzọ, ọhụrụ MacBook Air (2018) karịrị nnọọ.
The ochie 12in MacBook bụ ka dị, ma ọ bụ underpowered na overpriced, na 1.2GHz Core M3-7Y32 version (2017) efu £ 1.249. The nanị ihe mere-ewere nke a igwe bụ na ọ kasị nta na lightest (0.92kg) MacBook ị nwere ike nweta.
The ọhụrụ 13in MacBook Air bụ nta na-aga n'ihu karịa ochie version, nwere a dị nnọọ elu karịa ihuenyo, a ibu agha-aka trackpad, na mma ndị ọkà okwu. Ọ bụ na-ọzọ dị oké ọnụ na £ 1,199. The drawbacks agụnye urukurubụba keyboard na Core M / Y usoro processor.
N'ikpeazụ, n'ebe ahụ bụ 13in MacBook Pro enweghị Touch Bar (ufọt ufọt 2017), nke na-enye a ngwa ngwa asaa-emana 2.3GHz Core i5 (7360The) processor, mma ndịna na mma agba nsụgharị maka ihe mmezi £ 50, ie £ 1.249. The Pro nwekwara a ayama ihuenyo - 500 nits kama 300 nits - nke kwesịrị ka mma n'èzí ojiji. Ị hapụ ndị Ikuku si nkpirikpi udi, nke bụ ihe ọma maka dee, ma Pro bụghị budata arọ karịa ọhụrụ Air (1.37kg vs 1.25kg).
Ga-amasị m MacBook Pro ọzọ ma ọ bụrụ na o nwere ndị agadi Air keyboard, ma o yiri ka m na ọ bụ ihe kasị mma Buy - ma ọ bụrụ na i nwere ike imeli ya. M na-eche na ọ bụ gị mma nzọ maka ọdịnihu sistemụ mmelite.
upgrades bụ, dị ka e kwuru, oké ọnụ. Amụba Pro si 8GB nke ebe nchekwa 16GB efu £ 180, na upgrading na 128GB SSD na 256GB na-efu £ 200, otú ahụ ka spec ị chọrọ n'ezie na-efu £ 1.629. Agbakwunye AppleCare-akpọ ụkwụ ikpeazụ price ruo £ 1.878.
Ọ bụ a otutu ego, ma na-eche banyere ya dị ka £ 1 a ụbọchị ihe karịrị afọ ise na ya ga na-adịghị njọ otú ahụ.
Dị ka a gụsịrị akwụkwọ na-amụrụ, ị kwesịrị ị na eru maka agụmakwụkwọ discount, nke ga-eme ka ndị price. Lelee ịchọpụta ma ọ kacha mma ime nke a site na gị na mahadum, online, ma ọ bụ na ihe Apple Store.
Apple na-awade ahia-ins on ochie ngwá via ya GiveBack atụmatụ. Agaghị m agwa otú ihe ị ga-esi na-enweghị Oghere Usoro ọgụgụ gị MacBook Pro. Ọ bụ eleghị anya ọ bụghị ọtụtụ, ma ọ dịkarịa ala ochie warhorse ga ina emegharị nke ọma.
Ị nwere ajụjụ? Email ya Ask.Jack@theguardian.com
Olee otú na-ege ntị (ma hichapụ) everything you’...
Researchers Nyochaa foduru nke chere Mona Lisa
4 Real efe Cars na n'ezie na Ofufe
7236	3 Nke Apple MacBook laptọọpụ m kwesịrị izu?
← OnePlus 6T Review The 20 kacha mma Ngwa nke 2018 →